Tomb Raider inouya kuGnu / Linux zviri pamutemo; izvi ndizvo zvaunoda kuti ushande | Linux Vakapindwa muropa
Iyo kambani ine kodzero kumutambo weTomb Raider vhidhiyo, Feral Inopindirana, yakabheja Gnu / Linux uye semhedzisiro haina kungogadzira zvishandiso zvemitambo yemavhidhiyo kushanda paGnu / Linux asi zvakare yakagadzira yakasarudzika vhezheni yaLara Croft's vhidhiyo mutambo weGnu / Linux.
Kumuka kweTomb Raider: 20th Anniversary izita remutambo mutsva wevhidhiyo uyu muTomb Raider Saga. Iri zita rinoburitswa nhasi Kubvumbi 19 YeGnu / Linux. Feral Inopindirana, isati yatanga kuvhurwa kweiyo nyowani mutambo wevhidhiyo, yakaburitswa nezuro Hardware uye software zvinoda kuti mutambo wevhidhiyo unoda kushanda nemazvo.
Kumuka kweTomb Raider: 20th Anniversary ine mhando mbiri dzezvinodiwa: zvishoma zvinodiwa uye zvinokurudzirwa zvinodiwa Zvese zviri zviviri Hardware uye Software. Ehe, kunyangwe ichisunungurwa yeGnu / Linux, Feral Inopindirana yakaratidza izvo Izvo zvinongotsigira chete kugoverwa kweUbuntu uye ayo epamutemo zvinwiwa, inomhanya mune chero kumwe kugovera asi kushanda kwayo chaiko hakuna kuvimbiswa.
Nezve iyo inodiwa Hardware, mutsva wevhidhiyo mutambo unoda zvirinani kuve neIntel Core i3-4130T processor kana yakafanana AMD processor ine 8GB ye RAM uye 2GB kadhi yemifananidzo, zvine mutsindo iyo AMD Radeon R9 285 modhi kana iyo Nvidia GeForce GTX modhi. 680 kana mhando yepamusoro yechero ipi yemhando yepamusoro.
Asi izvo zvinodiwa zvinokurudzirwa neFeral Interactive zvinotevera: Intel Core i7-3770K processor ine 12GB ye RAM uye iyo Nvidia GeForce GTX 980Ti kadhi yemifananidzo yemifananidzo. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hapana mamiriro zvazvinotaura nezve Intel mifananidzo kadhi, saka kana isu tine yakasanganiswa giraidhi kadhi, zvinokwanisika kuti isu hatigone kutamba Rise yeTomb Raider: 20th Anniversary.
Ini pachangu, ndinoda Tomb Raider mitambo yemavhidhiyo, ndinofunga ivo vakapindwa muropa uye ivo vanopfuura kugutsa vashandisi vevatambi, asi zita iri nyowani rinoratidzika kwandiri kuti ndikumbire zvakawanda zvichienzaniswa nemamwe mazita mune saga. Chero zvazvingaitika, chinhu chakanakisa ndechekuedza uyu mutambo mutsva wevhidhiyo yeGnu / linux, chimwe chinhu chatinogona kuita kuburikidza neStam chikuva kana kuburikidza webhusaiti yekambani Feral Inopindirana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Tomb Raider inouya kuGnu / Linux zviri pamutemo; izvi ndizvo zvaunoda kuti ushande
Radeon Vega 20 Yakadonhedzwa mu AMD Linux Dzidzo